माओवादी ध्रूवीकरणको ईमान्दार पहल गरेका छौं र गरिरहन्छौ – गोपाल किराती «
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा लडिएको महान जनयुद्व नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रीक आन्दोलनको सर्वोच्च सँस्लेषण हो। अर्थात माओवादी जनयु’द्व भन्दा ठूलो राजनीतिक आ’न्दोलन नेपालमा यस अघि भएको थिएन। जनयु’द्वले राजनीतिक क्षेत्रमा पुँजीवादी गणतन्त्रसम्म तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा देशको सबै समुदाय र तहमा राष्ट्रीय चेतना जागृत गर्यो। आर्थिक क्षेत्रमा भने जनयु’द्वले चाहेको स्वाधीन राष्ट्रीय अर्थतन्त्र स्थापित हुन पाएको छैन। स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षामा नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार वहाल हुन सकिरहेको छैन। इण्डो-अमेरिकी दलालहरुका देशद्रोही अ’पराधका कारण देशभक्त जनसमुदाय टाउकोमाथि तरवार झुण्डिएको स्थितिमा बाँचेका छन। अत: देशको अर्थ-राजनीतिले छलाङमय अग्रगति लिन सकिरहेको छैन। र, नाम मात्रका उपलब्धीहरु पनि बलात् खोसिने जोखिममा छन।
वर्गीय एवं सामुदायिक दृष्टिले ईतिहास नभएका नेपालीहरुले लडिएको गुणात्मक परिवर्तनको आन्दोलन थियो, दस बर्षको जनयु’द्व। अर्थात महान जनयु’द्वका योद्वाहरु जो थिए, त्यस अघि उनीहरुको राजनीतिक ईतिहास नै थिएन। यसरी ईतिहास नभएका नेपालीले लडिएको जनयु’द्व भएकैले त्यो “महान” थियो र “महान जनयु’द्व” कहलायो। अत: ईतिहास नभएका मानिसहरुले लडेर निर्माण गरिएको आफ्नो गौरवमय इतिहासको नाम हो, माओवादी आन्दोलन। यसरी माओवादी आन्दोलनको विचार, भावना र ऐतिहासिक विरासतको निरन्तरता खातिर आज माओवादी तथा पूर्व माओवादीहरुवीच महाध्रूवीकरणको जोड्दार अपील गरिरहेका छौं हामी। यस अभियानमा सकारात्मक योगदान गर्ने माओवादी समर्थक जनसमुदाय र इमान्दार कमरेडहरुप्रति हामी हृदयदेखि नै आभारी छौं। र, अझ दृढतापूर्वक अग्रसर हुन जु’झारु आव्हान गर्दछौं।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा, प्रकारान्तरले नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा क. प्रचण्डहरुको पुनरागमन र विप्लव नेकपाको सडक आगमन संगसंगै हुन पुग्यो। जसलाई, हामीले हार्दिक स्वागत गर्यौं र भन्यौं:
उतातिर जालझे’ल र अनेक तिक्डमबाटै सही,
प्रकारान्तरले माओवादी प्रचण्ड बन्न पुगेका छन।
प्रचण्डलाई हो ची मिन्ह बनाउन हामी तयार छौं!
इतिहासका देशभक्त सेनानीहरुलाई सम्मानित गरोस्।
जसले, इण्डो-अमेरिकी सा’म्राज्यवादलाई खरानी पार्दै
स्वाधीन र समृद्व नेपालको झण्डा फहर्याउन सकोस्।
यसो भनेर हामीले ३ चैत ०७७ मा क. प्रचण्ड, क. मोहन बैध्य, क. विप्लव र डा. बाबुराम भट्टराई समक्ष महाध्रूवीकरणको पहल गरिदिन सादर पत्र लेखौं। यसमध्ये क. मातृका यादव मार्फत क. प्रचण्डले छलफलमा बोलाउनु भयो र प्रारम्भिक छलफल गर्यौं। तर, हामीहरु यत्ति बिघ्न सहज बनिदिंदा पनि प्रचण्डहरुबाट ठोस निश्कर्ष उपलब्ध भएको छैन। अरु तीन जनाबाट कुनै प्रतिकृया आएको छैन।
यो के हो? देश र जनताको पक्षमा ईमान्दार माओवादी कम्युनिस्टहरुले सर्वत्र प्रश्न उठाउनै पर्छ। यहाँ पुनर्गठित नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा अ’दालतको सफेद अ’न्याय र निर्वाचन आयोगको पत्र अनुसार नाम संशोधित नेकपा (माओवादी) का कमरेडहरु “जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक किन?” भनी हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। आफुलाई बाहेक अरु कसैलाई नदेख्ने आत्मकेन्द्रीत ब्यक्तिवादी कोणको रुढ राजनीतिमा यो प्रश्न स्वभाविक छ। परन्तु, आफ्ना कमरेडहरुलाई हामीले जवाफ गरिरहेका छौ-“इतिहासको चाल जसले बुझ्न सक्छ, उसले पहल गर्ने हो। किनकि, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा श्रमिकवर्गको अग्रदस्ता हो, ख्याल रहोस कि दस्ता होइन, अग्रदस्ता।”
अत: अग्रदस्ताका ईमान्दारहरुले आफ्नो सचेत कर्तब्य पालना गर्न किमार्थ चुक्नु हुँदैन। अन्तत: ईमान्दारहरु नै वैज्ञानिक बन्दछन। ईमान्दार र वैज्ञानिक मानिस नै कम्युनिस्ट हो अथवा कम्युनिस्ट बन्न हामीले ईमान्दार र वैज्ञानिक बन्नै पर्छ। महाध्रूवीकरणवारे हाम्रो पहल यसतर्फ केन्द्रीत छ, भनी बुझी दिनु श्रेयस्कर हुनेछ।
अर्को, “प्रचण्ड र बाबुरामलाई माओवादी देख्ने दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण” भनेर हामीलाई आ’रोपित गर्न खोज्ने महाशयहरु पनि छन। भ्यागुते चिन्तनका ती सं’कीर्ण तत्वहरुलाई के थाहा, महान जनयु’द्वको मर्म र माओवादी तथा पूर्व माओवादीहरु जुट्न नसके उत्पन्न हुने भयानक परिस्थिति!
हामी यो पनि भनीरहेका छौं कि तत्कालीन माले गुटका मदन भण्डारीहरु संगठनमा आफै सक्षम थिए। तर, तिनले बुढा मनमोहन अधिकारीलाई किन बोके? समग्र क्रान्तिका लागि त एमाले गुटको उपस्थितिले प्रतिकुलता नै थोपरेको छ, तर एमाले गुटको संसदीय राजनीतिका लागि भने मनमोहन बोकाईले उच्चतम हित गरेको प्रष्ट देखिन्छ। हाम्रै जीवनको यो यथार्थवारे बेखबर रहने टप्परटुँइयाशैलीको चेतना ऐतिहासिक भौतिकवाद हुनै सक्दैन। हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, वर्गदृष्टिकोण र पक्षधरता स्वतन्त्र हुनै पर्छ, तर नेपाली राजनीतिमा जिम्मेवार माओवादी कम्युनिस्टले एमाले त के चाहिने कुरा कांग्रेसबाट पनि सिक्न जान्नु पर्छ।
हामीले “महाध्रूवीकरणको पहल” भनेको अहिले जो जसले जुन विचार र कार्यदिशा लिएर हिंडिएको छ, त्यता-त्यता दौडने भनेको होइन र त्यो सम्भव पनि छैन। हामीले भनेको खास कुरा यो हो कि माओवादी तथा पूर्व माओवादीहरु जुटौं, वैज्ञानिक समाजवाद र जनगणतन्त्रको राजनीतिक कार्यक्रममा अघि बढौं!
अन्त्यमा, देश र जनताको हित खातिर जो जसले राजनीतिक गतिको चाल बुझ्ने ल्याकत राख्दैनन्, इतिहासको चि’हानमा गाडिने निश्चित छ, भनीरहनु पर्दैन। महाध्रूवीकरण पहललाई नजरअन्दाज गरेर जो जसले माओवादी समर्थक जनसमुदाय एवं ईमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई धुरुधुरु रुवाउने दुष्टशाहस गर्लान, त्यस प्रबृत्तिको भ’ण्डाफोर चानचुने होला, भनी नसम्झे हुन्छ।